Axmed Fiqi “Weerarkii UNDP wuxuu dhaawac halis ah u geystay kalsoonida caalamku ku qabay amniga Muqdisho” |
Axmed Fiqi “Weerarkii UNDP wuxuu dhaawac halis ah u geystay kalsoonida caalamku ku qabay amniga Muqdisho”
Taliyihii hore ee nabad sugida dowlada Somalia Axmed Macalin Fiqi ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in Al-Shabaab ay maalin cad weerarto, saacado kooban la wareegto, kana dhex dagaalanto xaruntii ugu weyneyd QM ku laheyd Somalia.
Axmed Macalin Fiqi ayaa xusay in taasi ay cadeyn buuxda u tahay sida dowlada Somalia ay ugu fashilantay xaqiijinta amaanka caasimada iyo difaacida xarumaha muhiimka ah ee dowlada iyo kuwa heyadaha taageera.
“Markii ay xilka qabanaysay dowladan waxay balan qaadeen iney wax ka qaban doonaan lix tiir oo uu ugu horeeyo amaanka kaasoo ay sheegeen iney muhimada 1aad, 2aad iyo 3aad siin doonaan, hase ahaatee taasi hadda ma muuqato” ayuu intaa ku daray Axmed Fiqi.
Taliyihii hore ee nabad sugida dowlada Somalia Axmed Macalin Fiqi oo haatan jooga magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xarunta UNDP uu dhaawac halis ah u geystay kalsoonida caalamku ku qabay amaanka caasimada.
“Aniga xiligii aan agaasimaha ka ahaa heyadda nabad sugida, qaraxyada ismiidaaminta ah min lix bilood ayaa u dhexeysay, laakiin hadda labadii weerar ee lagu qaaday UNDP iyo xarunta maxkamadaha waxaa u dhexeeyey labo bilood oo kaliya, hoobiyeyaasha lagu soo tuuro madaxtooyada waa sii bateen labadii usbuucba mar ayaa hadda la soo duqeeyaa” ayuu intaa ku daray Axmed Fiqi.
Fiqi ayaa sheegay in saraakiisha iyo madaxda dowlada aysan u dhameyn had iyo jeerna isku khilaafaan qaabka loola dagaalamayo Al-shabaab taasna ay ugu wacan tahay sharciga la dagaalanka argagasxisada oo aan jirin.
“Wiilka Al-Shabaab ka tirsan marka uu weerarka soo qaadayo qabiil ma lahan, laakiin marka la soo qabto waxaa uu yeelanayaa qabiil, waxaa u doodaya dad fara badan oo ay ku jiraan, saraakiil, xildhibaano, waalidiin, oday dhaqameed iyo qaar kale oo leh wiilkeena Al-Shabaab maaha ee ha la sii daayo haddii kale arinta reer hebel iyo reer hebel ayey gaareysaa” ayuu intaa ku daray Fiqi.
Ugu yaraan 20 qof oo isugu jira shaqaalaha QM oo Soomaali iyo ajaaniiba leh iyo dad shacab ah ayaa ku dhintay weerarkii labo maalin lagu qaaday xarunta UNDP ee magaalada Muqdisho kaasoo kooxihii fuliyey ay u adeegsadeen isqarxin iyo weeraro toos ah, waxaana sheegatay Al-shabaab.